What if my child is in contact with someone with COVID-19: Kuthiwani uma ingane yami ixhumana nomuntu one-COVID-19? – Messages for Mothers
Kuya ngokuthi “bangaxhumana ngokusondelene” noma cha. “Oxhumana naye ngokusondelene” ngumuntu obengaphansi kwemitha elingu-1 ukusuka enganeni yakho isikhathi esingaphezu kwemizuzu engu-15 futhi oyedwa noma ababili bengasifakile isifihla-buso.
Ukuxhumana kwasekhaya: kuzoba othintana naye kakhulu, ngakho ingane yakho idinga ukuhlala ekhaya izinsuku eziyi-14, noma ngabe iphilile futhi ingakhombisi zimpawu ze-COVID-19.
Ukuxhumana kwasesikoleni: Uma lowo muntu (uthisha noma omunye umfundi) esondelene kakhulu naye, ingane yakho kufanele futhi ihlale ekhaya izinsuku eziyi-14.
Uma kungekho ukuxhumana okuseduze, asikho isidingo sokuhlala ekhaya.
← How can I prevent my child passing on COVID-19 at home: Yini engenziwa ukuvimbela ingane yami ukudlulisela i-COVID-19 ekhaya? → How can I protect my child when they go out for exercise or to school: Ngingazivikela kanjani izingane zami uma ziphumela ngaphandle ukuyozivocavoca noma ziya esikoleni?